Ukubaluleka Komsebenzi KaNkulunkulu Wokuvivinya Nokucwenga | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Ekuphileni kwakhe, uPetru wabhekana nokucwengwa izikhathi ezingamakhulu futhi wabhekana nezinhlupheko eziningi ezibuhlungu. Lokhu kucwengwa kwaba yisisekelo sothando lwakhe olukhulukazi lukaNkulunkulu, futhi lokhu kwaba yinto ebalulekile empilweni yakhe yonke. Ukuthi wakwazi ukuba nalolu thando olukhulukazi lukaNkulunkulu empeleni, kolunye uhlangothi, kwaba ngenxa yokuphikelela kwakhe ethanda uNkulunkulu; okubaluleke kakhulu, kodwa-ke, kwaba ngenxa yokucwenga nokuhlupheka abhekana nakho. Lokhu kuhlupheka kwaba yisiqondiso saKhe endleleni yokuthanda uNkulunkulu, futhi kwaba yinto angazange ayikhohlwa. Uma abantu bengahlangabezani nobuhlungu bokucwengwa uma bethanda uNkulunkulu, lokho kusho ukuthi uthando lwabo lusagcwele imvelo kanye nokwenza ngokuthanda kwabo; uthando olufana nalolu lugcwele imibono kaSathane, futhi nje alukwazi neze ukufeza intando kaNkulunkulu. Ukuba nothando oluphikelelayo lukaNkulunkulu akufani nokuthanda uNkulunkulu ngokweqiniso. Yize noma konke abakucabangayo ezinhliziyweni zabo kungenxa yokuthanda uNkulunkulu, nokwenelisa uNkulunkulu, sengathi imicabango yabo ayinamicabango yabantu, sengathi konke abakwenzayo bakwenzela uNkulunkulu, uma imicabango yabo ilethwa phambi kukaNkulunkulu, imicabango enjalo ayinconywa noma ayibusiswanga nguNkulunkulu. Ngisho noma abantu sebeqondisise kahle wonke amaqiniso—uma sebewazi wonke—lokhu akukwazi ukubizwa ngophawu lokuthanda uNkulunkulu, angeke kuthiwe laba bantu ngempela bathanda uNkulunkulu. Ngisho noma sebeqondisise amaqiniso amaningi ngaphandle kokubhekana nokucwengwa, abantu abakwazi ukuphila ngala maqiniso; kungesikhathi sokucwengwa kuphela lapho abantu bengaqonda okushiwo ngempela yilawa maqiniso, yilapho kuphela lapho abantu bengakwazi ukwazisa ngempela incazelo yawo yangaphakathi. Ngaleso sikhathi, uma sebezama futhi, bayakwazi ukusebenzisa la maqiniso ngendlela, kanye nangokuhambisana nentando kaNkulunkulu; ngaleso sikhathi, imibono yabo yabantu iyancipha, isimo sabo semvelo siyehla, kanti nemizwa yabo yokuba umuntu iyashabalala; kungaleso sikhathi kuphela lapho ukwenza kwabo kuyisibonakaliso seqiniso sothando lukaNkulunkulu.
Lapho uNkulunkulu enza umsebenzi wokucwenga umuntu, umuntu uyahlupheka. Lapho ecwengisiswa ngokwengeziwe, uthando lwakhe ngoNkulunkulu luba lukhulu, futhi amandla amakhulu kaNkulunkulu ambulwa kuye ngokuthe xaxa. Lapho kuncipha ukucwengwa komuntu, luyancipha nothando lwakhe ngoNkulunkulu, futhi aba mancane namandla kaNkulunkulu enziwa abe sobala kuye. Lapho kuba kukhulu ukucwengwa kwakhe nobuhlungu nalapho kwanda usizi lwakhe, luyojula nakakhulu uthando lwakhe lwangempela lukaNkulunkulu, luyoba qotho nakakhulu ukholo lwakhe kuNkulunkulu, futhi lujule nakakhulu ulwazi lwakhe ngoNkulunkulu. Ezintweni enizodlula kuzo, nizobona ukuthi labo abadlula ekucwengweni okukhulu nasezinhlungwini, nokubhekanweni nabo okukhulu kanye nokuqondiswa, bamthanda ngojulile uNkulunkulu, futhi baba nolwazi olunzulu nolujula ngokwengeziwe ngoNkulunkulu. Labo abangakaze bezwe ukuthi kubhekanwe nabo kodwa abanolwazi olungatheni, futhi kuphela bangathi: “UNkulunkulu muhle kakhulu, abantu ubanika umusa ukuze bajabule Ngaye.” Uma abantu bezwe ukubhekanwa nabo nokuqondiswa, khona-ke bayokwazi ukukhuluma ulwazi lwangempela lukaNkulunkulu. Ngakho lapho umsebenzi kaNkulunkulu umangalisa ngokwengeziwe kumuntu, uba yigugu futhi ubaluleke nakakhulu; awuqondakali ngokwengeziwe kini futhi awuhambisani nakakhulu nemibono yenu, umsebenzi kaNkulunkulu ukwazi ngokwengeziwe ukuninqoba, ukunizuza, nokuniphelelisa. Ukubaluleka komsebenzi kaNkulunkulu kubanzi kakhulu! Ukube akamcwenganga ngale ndlela umuntu, ukube akasebenzanga ngale ndlela, khona-ke umsebenzi kaNkulunkulu ubungeke ube namiphumela futhi ubungeke ubaluleke. Lesi yisizathu sokubaluleka kokukhetha Kwakhe iqembu labantu ngezinsuku zokugcina. Ngaphambili, kwathiwa uNkulunkulu wayezokhetha futhi alizuze leli qembu. Lapho uba mkhulu ngokwengeziwe umsebenzi awenza kini, luyajula futhi luhlanzeke ngokwengeziwe uthando lwenu lukaNkulunkulu. Lapho uba mkhulu ngokwengeziwe umsebenzi kaNkulunkulu, umuntu ukwazi kakhulu ngokwengeziwe ukuzwa ukuhlakanipha Kwakhe futhi lujula ngokwengeziwe nolwazi lomuntu Ngaye.
Kucashunwe “Labo Abazopheleliswa Kumele Bacwengwe” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
UNkulunkulu angabaphelelisa abantu ezintweni ezinhle nakwezimbi. Kuya nokuthi uyakwazi yini ukubona, nokuthi ngabe uphokophelele na ukupheleliswa nguNkulunkulu. Uma ufuna ngempela ukupheleliswa nguNkulunkulu, izinto ezimbi ngeke zikwenze uzwe ungolahlekelwe, kodwa zingakulethela izinto zeqiniso, zikwenze wazi ukuthi yini le oyintulayo kuwe ngaphakathi, nokuthi ukwazi ukubhekana nezimo zakho, nokuthi ubone ukuthi umuntu akanalutho futhi akayilutho; uma ungahlangabezani nezilingo, awazi, futhi uzohlala uzwa sengathi ungaphezulu kwabanye futhi ungcono kunabo bonke abantu. Kukho konke uzobona ukuthi konke lokhu okuze ngaphambilini kwakwenziwe nguNkulunkulu futhi kwavikelwa uNkulunkulu. Ukungena ezilingweni kukushiya ungenalo uthando noma ukholo, ungakwazi nokuthandaza, ungakwazi nokucula amaculo—kuthi ungasanakile, kukho konke lokhu ufinyelele ekuzazini wena uqobo. UNkulunkulu unezindlela eziningi zokuphelelisa umuntu. Usebenzisa zonke izindlela zezimo ukuze abhekane nesimo sokukhohlakala somuntu, asebenzise izinto ezehlukene ukuze abeke umuntu obala; ngakolunye uhlangothi ubhekana nomuntu, ngakolunye ubeka umuntu obala, kolunye uveza umuntu, agubhe aveze “izimfihlakalo” zisekujuleni kwenhliziyo yomuntu, akhombise umuntu ubunjalo bakhe ngokuveza izimo zakhe eziningi. UNkulunkulu uphelelisa umuntu ngezindlela eziningi—ngezambulo, ngokubhekana naye, ngokumcwengisisa, nokumsola—ukuze umuntu akwazi ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu owenzayo.
Okwedlule：Ukubaluleka Komsebenzi KaNkulunkulu Wokwahlulela Nokusola
Okulandelayo：Kufanele Ukholwe Kanjani KuNkulunkulu Ukuze Usindiswe futhi Upheleliswe?